Ugwetshiwe owantshinga ingane ethoyilethi e-PMB | News24
Ugwetshiwe owantshinga ingane ethoyilethi e-PMB
Durban - INkantolo yeMantshi yaseMgungundlovu imgwebe iminyaka emihlanu ebhadla ejele owesifazane owafaka usana lwakhe olusanda kuzalwa ethoyilethi lomgodi.
Le ngane yatholakala ngomhlaka-7 Juni ngemuva kokuthi abantu ababedlula ngendlela beyizwe ikhala base bebiza amaphoyisa.
Lolu sana lwalubanda kuhle kweqhwa ngesikhathi luhlengwa lwase luphuthunyiswa eGrey's Hospital, eMgungundlovu.
IMantshi uChris van Vuuren ugwebe uNontobeko Ngcobo, 29, iminyaka engu-8 esejele kwathi emithathu yalengiswa.
UNgcobo, onezinye izingane ezimbili, uthi wenza lokhu ngemuva kokulaxazwa ubaba wengane nomndeni wakhe wamtshela ukuthi ngeke ukwazi ukumsiza.